Imigomo nemibandela ejwayelekile yokuthenga: B2B - Law & More B.V.
Blog » Imigomo nemibandela ejwayelekile yokuthenga: B2B
Imigomo nemibandela ejwayelekile yokuthenga: B2B
Njengosomabhizinisi ungena ezivumelwaneni njalo. Futhi nezinye izinkampani. Imibandela nemibandela ejwayelekile ivame ukuba yingxenye yesivumelwano. Imigomo nemibandela ejwayelekile ilawula izihloko (zomthetho) ezibalulekile kuzo zonke izivumelwano, njengemigomo yokukhokha nezikweletu. Uma, njengosomabhizinisi, uthenga izimpahla kanye / noma izinsizakalo, ungahle ube nesethi yezimo zokuthenga ezijwayelekile. Uma ungenazo lezi, ungacabanga ukuzidweba. Ummeli ovela ku- Law & More ngizojabula ukukusiza ngalokhu. Le bhulogi izoxoxa ngezici ezibaluleke kakhulu zemigomo nemibandela ejwayelekile yokuthenga futhi izogqamisa izimo ezithile zemikhakha ethile. Kubhulogi yethu 'Imibandela nemibandela ejwayelekile: okufanele ukwazi ngazo' ungafunda imininingwane ejwayelekile mayelana nemigomo nemibandela ejwayelekile kanye nolwazi olunentshisekelo kubathengi noma ezinkampanini ezigxila kubathengi.
Yimiphi imigomo nemibandela ejwayelekile?
Imibandela nemibandela ejwayelekile ivame ukuqukethe imibandela ejwayelekile engasetshenziswa futhi kuyo yonke inkontileka. Enkontilekeni uqobo amaqembu avumelana ngokuthi yini ngempela ayilindele komunye nomunye: izivumelwano eziyinhloko. Zonke izinkontileka zehlukile. Izimo ezijwayelekile zibeka imibandela. Imigomo nemibandela ejwayelekile kuhloswe ukuthi isetshenziswe kaninginingi. Uwasebenzisa uma ufaka njalo uhlobo olufanayo lwesivumelwano noma ungenza kanjalo. Imibandela nemibandela ejwayelekile yenza kube lula kakhulu ukungena kuzinkontileka ezintsha, ngoba izifundo (ezijwayelekile) eziningi akudingeki zibekwe isikhathi ngasinye. Izimo zokuthengwa yizimo ezisebenza ekuthengeni izimpahla namasevisi. Lo ngumqondo obanzi kakhulu. Izimo zokuthenga zingatholakala kuzo zonke izinhlobo zemikhakha efana nomkhakha wezokwakha, umkhakha wezokunakekelwa kwempilo neminye imikhakha yezinsizakalo. Uma usebenza ezimakethe zokuthengisa, ukuthenga kuzoba ukuhleleka kosuku. Ngokuya ngohlobo lwebhizinisi elenziwe, imigomo nemibandela efanelekile ejwayelekile idinga ukwenziwa.
Lapho usebenzisa imigomo nemibandela ejwayelekile, izici ezimbili zibaluleke kakhulu: 1) kunini lapho imigomo nemibandela ingaqalwa khona, futhi 2) yini engalawulwa futhi engeke ilawulwe ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile?
Usebenzisa imigomo nemibandela yakho ejwayelekile
Esimweni sokuphikisana nomhlinzeki, ungafisa ukuthembela ezimweni zakho zokuthenga ezijwayelekile. Ukuthi ungathembela kuzo empeleni kuncike ezicini eziningi. Okokuqala, imigomo nemibandela ejwayelekile kufanele kumenyezelwe ukuthi iyasebenza. Ungamemezela kanjani ukuthi ayasebenza? Ngokusho esicelweni sekhotheshini, i-oda noma i-oda lokuthenga noma esivumelwaneni sokuthi umemezela imibandela yakho yokuthenga ejwayelekile esebenza esivumelwaneni. Isibonelo, ungafaka umusho olandelayo: 'Imibandela yokuthenga ejwayelekile ye- [igama lenkampani] isebenza kuzo zonke izivumelwano zethu'. Uma usebenza ngezinhlobo ezahlukahlukene zokuthenga, ngokwesibonelo kokubili ukuthengwa kwezimpahla kanye nenkontileka yomsebenzi, futhi usebenza ngezimo ezejwayelekile ezijwayelekile, kufanele futhi ukhombise ngokusobala ukuthi yimiphi imibandela oyimemezela ukuthi iyasebenza.
Okwesibili, izimo zakho zokuthenga ezijwayelekile kufanele zamukelwe iqembu lakho lokuhweba. Isimo esihle ukuthi lokhu kwenziwa ngokubhaliwe, kepha lokhu akudingekile ukuze imibandela isebenze. Imibandela nayo ingamukelwa ngokuthula, ngokwesibonelo, ngoba umphakeli akazange abhikishe ngesimemezelo sokusebenza kwezimo zakho zokuthenga jikelele futhi ngemuva kwalokho angene esivumelwaneni nawe.
Ekugcineni, umsebenzisi wezimo zokuthenga ezijwayelekile, okusho ukuthi wena njengomthengi, unesibopho semininingwane (Isigaba 6: 233 ngaphansi kwe-Dutch Civil Code). Lesi sibopho siyagcwaliseka uma imibandela yokuthenga ejwayelekile inikezwe umphakeli ngaphambi noma lapho kuphetha isivumelwano. Uma ukunikezela ngezimo zokuthenga ezijwayelekile ngaphambi noma ngesikhathi sokuphetha kwenkontileka akunakwenzeka ngokufanelekile, isibopho sokunikeza ulwazi singagcwaliseka ngenye indlela. Kuleso simo kuzokwanela ukusho ukuthi imibandela iyatholakala ukuze ihlolwe ehhovisi lomsebenzisi noma kwiChamber of Commerce ekhonjiswe nguyena noma ukuthi ifakwe kumarejista asenkantolo, nokuthi izothunyelwa uma iceliwe. Lesi sitatimende kufanele senziwe ngaphambi kokuphela kwenkontileka. Iqiniso lokuthi ukulethwa akunakwenzeka ngokufanelekile kungacatshangelwa kuphela ezimweni ezihlukile.
Ukulethwa nakho kungenzeka nge-elektroniki. Kulokhu, izidingo ezifanayo zisebenza njengokunikezwa ngokomzimba. Kuleso simo, izimo zokuthenga kufanele zenziwe zitholakale ngaphambi noma ngesikhathi sokuphothula inkontileka, ngendlela yokuthi umphakeli akwazi ukuzigcina futhi zitholakalele ukusetshenziswa esikhathini esizayo. Uma kunjalo akunakwenzeka ngokufanelekile, umphakeli kufanele aziswe ngaphambi kokuphela kwesivumelwano lapho kungathintwa khona imibandela ngekhompyutha nokuthi bazothunyelwa nge-elektroniki noma ngenye indlela uma becelwa. Ngicela uqaphele: uma isivumelwano singaphothulwa ngekhompyutha, kudingeka imvume yomphakeli ukuze imibandela yokuthenga jikelele itholakale ngogesi!
Uma isibopho sokuhlinzeka ngolwazi singazange sifezeke, ungahle ungakwazi ukusebenzisa isigatshana kumigomo nemibandela ejwayelekile. Isigaba somthetho siyabe sesingasebenzi. Uhlaka olukhulu alunakusebenzisa ubuze ngenxa yokwephula isibopho sokunikeza imininingwane. Elinye iqembu lingahle lithembele ekuboneleleni nasekulinganiseni. Lokhu kusho ukuthi elinye iqembu lingaphikisana nalokho nokuthi kungani ilungiselelo ezimweni zakho zokuthenga jikelele lingamukeleki ngokubheka izinga elishiwo ngenhla.
Uma umemezela ukuthi imibandela yakho yokuthenga ejwayelekile iyasebenza, kungenzeka ukuthi umphakeli akwenqabe ukusebenza kwemibandela yakho futhi athi imibandela yakhe yokulethwa jikelele iyasebenza. Lesi simo sibizwa ngokuthi 'yimpi yamafomu' ku-jargon yezomthetho. ENetherlands, umthetho oyinhloko ukuthi imibandela okukhulunywa ngayo kuqala iyasebenza. Ngakho-ke kufanele uqinisekise ukuthi umemezela ukuthi imibandela yakho yokuthenga ejwayelekile iyasebenza futhi uyinikele kusenesikhathi. Imibandela ingamenyezelwa ukuthi iyasebenza ngaphambi kwesikhathi sokucela ukunikezwa. Uma umphakeli engazenqabeli ngokucacile izimo zakho ngesikhathi sokunikezwa, izimo zakho zokuthenga ezijwayelekile ziyasebenza. Uma umphakeli efaka imigomo nemibandela yakhe kwikhotheshini (okunikezwayo) futhi eyenqaba ngokusobala eyakho bese wamukela lokho okunikezwayo, kufanele uphinde ubheke imibandela yokuthenga kwakho futhi wenqabe ngokusobala leyo yomphakeli. Uma ungabalahli ngokusobala, kusazosungulwa isivumelwano okuyosebenza kuso imigomo nemibandela yokuthengisa ejwayelekile! Ngakho-ke kubalulekile ukuthi utshele umphakeli ukuthi ufisa ukuvuma kuphela uma imibandela yakho yokuthenga ejwayelekile isebenza. Ukuze kuncishiswe ithuba lezingxoxo, kungcono ukufaka iqiniso lokuthi imibandela yokuthenga ejwayelekile iyasebenza esivumelwaneni uqobo.
Isivumelwano Samazwe Ngamazwe
Lokhu okungenhla kungenzeka kungasebenzi uma kunenkontileka yokuthengisa yomhlaba wonke. Kuleso simo inkantolo kungadingeka ibheke eVienna Sales Convention. Kulowo mhlangano kusebenza 'umthetho we-knock out'. Umthetho omkhulu ukuthi inkontileka iyaphothulwa kanye nezinhlinzeko ngokwemigomo nemibandela okuvunyelwene ngayo ziyingxenye yenkontileka. Izinhlinzeko zombili izimo ezijwayelekile zokuthi ukungqubuzana akubi yingxenye yesivumelwano. Ngakho-ke amaqembu kufanele enze amalungiselelo mayelana nezinhlinzeko eziphikisanayo.
Inkululeko yenkontileka nemikhawulo
Umthetho wesivumelwano ulawulwa ngumgomo wenkululeko yesivumelwano. Lokhu kusho ukuthi awukhululekile kuphela ukunquma ukuthi yimuphi umhlinzeki ongena naye esivumelwaneni, kodwa futhi nokuthi uvumelana ngani ngempela nalelo qembu. Kodwa-ke, akuyona yonke into engabekwa ngaphansi kwezimo ngaphandle komkhawulo. Umthetho futhi ubeka ukuthi futhi lapho izimo ezijwayelekile zingaba 'ezingavumelekile'. Ngale ndlela abathengi banikezwa ukuvikelwa okwengeziwe. Kwesinye isikhathi osomabhizinisi bangafaka nemithetho yokuvikela. Lokhu kubizwa ngokuthi isenzo se-reflex. Lezi ngokuvamile zingabalingani abancane. Laba, ngokwesibonelo, ngabantu bemvelo abenza umsebenzi othile noma ibhizinisi, njengombhaki wendawo. Kuya ngezimo ezithile ukuthi lelo qembu lingathembela emithethweni yokuvikela. Njengeqembu elithengayo akudingeki ukuthi ukubheke lokhu ezimeni zakho ezijwayelekile, ngoba elinye iqembu lihlale liyiqembu elingakwazi ukufaka isikhalazo emithethweni yokuvikela abathengi. Elinye iqembu livame ukuba iphathi ethengisa / eletha noma enikezela ngezinsizakalo njalo. Uma wenza ibhizinisi ngeqembu 'elibuthakathaka' kungenziwa izivumelwano ezihlukile. Uma ukhetha ukusebenzisa imibandela yakho ejwayelekile yokuthenga, uzibeka engcupheni yokuthi ungathembeli esigatshaneni esithile ezimweni ezijwayelekile ngoba, ngokwesibonelo, senziwa ize uzakwenu.
Umthetho futhi unemikhawulo enkululekweni yenkontileka esebenza kuwo wonke umuntu. Isibonelo, izivumelwano phakathi kwamaqembu kungenzeka zingaphikisani nomthetho noma ukuhleleka komphakathi, ngaphandle kwalokho azisebenzi. Lokhu kusebenza kokubili kuzinhlelo ezisenkontilekeni uqobo nakwezinhlinzeko ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile. Ngaphezu kwalokho, amagama angenziwa ize uma engamukeleki ngokwezindinganiso zokucabangela kanye nokungenzeleli. Ngenxa yenkululeko eshiwo ngenhla yenkontileka kanye nomthetho wokuthi izivumelwano ezenziwe kufanele zenziwe, leli zinga eselikhulunywe ngenhla kumele lisetshenziswe ngokuzibamba. Uma ukusetshenziswa kwaleli gama okukhulunywa ngalo kungamukeleki, kungachithwa. Zonke izimo zecala elithile zidlala indima ekuhlolweni.
Yiziphi izihloko ezihlanganiswa ngemigomo nemibandela ejwayelekile?
Ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile ungalindela noma isiphi isimo ongazithola ukuso. Uma ilungiselelo lingasebenzi esimweni esithile, amaqembu angavuma ukuthi lo mbandela - nanoma yiziphi ezinye izinhlinzeko - zizokhishwa. Kungenzeka futhi ukuthi kwenziwe amalungiselelo ahlukile noma acacisiwe kusivumelwano uqobo kunemigomo nemibandela ejwayelekile. Ngezansi kunezihloko eziningi ezingalawulwa ezimweni zokuthenga kwakho.
Okokuqala, kuyasiza ukufaka uhlu lwezincazelo ezimweni zokuthenga ezijwayelekile. Lolu hlu luchaza amagama abalulekile abuyela ezimeni.
Isikweletu yisifundo esidinga ukulawulwa ngendlela efanele. Ngokomthetho, ufuna uhlelo olufanayo lwesikweletu lusebenze kuyo yonke inkontileka. Ufuna ukukhipha isikweletu sakho ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke lokhu kuyisihloko okufanele silawulwe ngaphambi kwesikhathi ezimweni zokuthenga jikelele.
Ukuhlinzekelwa kwempahla enobuhlakani bengqondo nakho kufanele kufakwe emigomeni nemibandela ejwayelekile. Uma uvame ukuthuma abakhi bezakhiwo ukuthi bakhe imidwebo yokwakha kanye / noma osonkontileka ukuletha imisebenzi ethile, uzofuna ukuthi imiphumela yokugcina ibe yimpahla yakho. Ngokomthetho, umakhi wezakhiwo, njengomenzi, unelungelo lobunikazi kwimidwebo. Ezimweni ezijwayelekile, isibonelo, kungashiwo ukuthi umakhi wezakhiwo udlulisa ubunikazi noma anikeze imvume yokuthi kwenziwe ushintsho.
Lapho kuxoxiswana nelinye iqembu noma lapho kwenziwa ukuthenga kwangempela, (ibhizinisi) imininingwane ebucayi ivame ukwabiwa. Ngakho-ke kubalulekile ukufaka ukuhlinzekwa ngemigomo nemibandela ejwayelekile eqinisekisa ukuthi ozakwenu abakwazi ukusebenzisa imininingwane eyimfihlo (kanjalo nje).
Uma uthenga imikhiqizo noma uthumela iqembu ukuthi linikeze ngezinsizakalo, ngokwemvelo ufuna lelo elinye iqembu liqinisekise iziqu noma imiphumela ethile.
Umthetho osebenzayo nejaji elinekhono
Uma iqembu lakho lenkontileka liseNetherlands futhi ukulethwa kwezimpahla nezinsizakalo nakho kwenzeka eNetherlands, ukuhlinzekwa komthetho osebenza enkontilekeni kungabonakala kungabalulekile kangako. Kodwa-ke, ukuze uvimbele izimo ezingalindelekile, kuwumqondo omuhle ukufaka njalo emigomeni nemibandela yakho jikelele ukuthi yimuphi umthetho omemezela ukuthi uyasebenza. Ngaphezu kwalokho, ungakhombisa ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile ukuthi iyiphi ingxabano okufanele ihanjiswe enkantolo.
Uhlu olungenhla aluphelele. Kunezifundo eziningi ezengeziwe ezingalawulwa ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile. Lokhu futhi kuya ngohlobo lwenkampani kanye nomkhakha esebenza kuwo. Ngendlela yokwenza umzekeliso, sizongena ezibonelweni eziningi zezihloko ezithakazelisa izimo zokuthenga jikelele uma kwenzeka unenkontileka yomsebenzi.
Uma wena njengothishanhloko noma usonkontileka uhlanganyela nosonkontileka (sub) ukwenza umsebenzi obalulekile, lapho-ke uba ngaphansi komthethonqubo wesikweletu esenziwe ngamaketanga. Lokhu kusho ukuthi unesibopho sokukhokha intela ekhokhelwa ngusonkontileka wakho (omncane). Intela yamaholo kanye neminikelo yezokuphepha komphakathi ichazwa njengezintela zamaholo kanye neminikelo yezokuphepha komphakathi. Uma usonkontileka wakho noma usonkontileka omncane engahambisani nezibopho zokukhokha, i-Tax and Customs Administration ingakubeka icala. Ukuze uvikele isikweletu ngangokunokwenzeka futhi unciphise ubungozi, kufanele wenze izivumelwano ezithile nosonkontileka wakho (ongaphansi). Lokhu kungabekwa ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile.
Isibonelo, njengothishanhloko ungavumelana nosonkontileka wakho ukuthi ngaphambi kokuthi aqale ukusebenza uzophenya isimo esizeni bese ekubika uma kukhona amaphutha esabelweni. Lokhu kuvunyelwene ngakho ukuvimbela usonkontileka ukuthi enze umsebenzi ngokungaboni futhi kuphoqa usonkontileka ukuthi acabange kanye nawe. Ngale ndlela, noma yimuphi umonakalo ungavinjelwa.
Ngezizathu zokuphepha, ufuna ukubeka izidingo kuzimpawu zikasonkontileka nabasebenzi benkontileka. Isibonelo, ungadinga isitifiketi se-VCA. Lesi yisifundo okumele kubhekwane naso kakhulu ngemigomo nemibandela ejwayelekile.
Njengosomabhizinisi ungahle uthande ukumemezela imigomo nemibandela efanayo yokuphatha yokwenziwa kweMisebenzi kanye ne-Technical Installation Works ka-2012 esebenza ebudlelwaneni nelinye iqembu. Kuleso simo kubalulekile ukuthi kumenyezelwe ukuthi kuyasebenza ezimweni zokuthenga ezijwayelekile. Ngaphezu kwalokho, noma ikuphi ukuphambuka okuvela ku-UAV 2012 nakho kufanele kukhonjiswe ngokusobala.
The Law & More abameli basiza abathengi kanye nabahlinzeki. Ngabe ufuna ukwazi kahle ukuthi iyini imigomo nemibandela ejwayelekile? Abameli abavela Law & More ingakweluleka ngalokhu. Bangakudalela nemigomo nemibandela ejwayelekile noma bahlole esekhona.
Thumela Previous Ukwamukelwa nokuphoqelelwa kwezahlulelo zangaphandle eNetherlands
Post Next Umthetho wokuqothuka nezinqubo zawo